Fa maninona no malaza be ny infografika? Soso-kevitra: Votoatiny, Fikarohana, sosialy ary fiovam-po! | Martech Zone
Fa maninona no malaza be ny infografika? Soso-kevitra: Votoatiny, Fikarohana, sosialy ary fiovam-po!
Sabotsy, Martsa 6, 2021 Alakamisy, Aprily 7, 2022 Douglas Karr
Betsaka aminareo no mitsidika ny bilaoginay noho ny ezaka tsy tapaka ataoko amin'ny fizarana infografika marketing. Raha tsorina dia… tiako izy ireo ary malaza be ry zareo. Misy antony maro mahatonga ny infografika hiasa tsara amin'ny paikadim-barotra nomerika ataon'ny orinasa:
Visual - Ny antsasaky ny atidohantsika dia natokana ho an'ny fahitana ary ny 90% amin'ny fampahalalana tazominay dia hita maso. Ny sary, ny kisary ary ny sary dia fampitaovana fitsikerana rehetra hampitana amin'ny mpividy anao. 65% amin'ny mponina dia mianatra amin'ny maso.
Memory - Fantatra ny fikarohana izany, rehefa afaka telo andro, ny mpampiasa iray dia mitazona ny 10-20% fotsiny amin'ny fampahalalana an-tsoratra na voalaza fa efa ho 65% amin'ny fampahalalana an-tsary
Transmission - Ny atidoha dia afaka mahita sary izay maharitra 13 millisecond fotsiny ary ny masontsika dia afaka misoratra hafatra an-tsary 36,000 isan'ora. Afaka mahazo ny hevitry ny a sary hita maso latsaky ny 1/10 segondra ary sary dia voahodina 60,000X haingana kokoa ao amin'ny ati-doha noho ny lahatsoratra.
Mitady - Satria matetika ny infographic dia misy sary tokana izay mora ny mamoaka sy mizara manerana ny tranonkala, dia mamorona backlinks mampitombo ny lazany izy ireo ary, amin'ny farany, ny filaharan'ny pejy anaovanao azy ireo.
fanazavana - Ny infographic noforonina tsara dia mety haka vohoka tena sarotra ary hanazava izany amin'ny maso ny mpamaky. Ny maha samy hafa ny fahazoana ny lisitry ny lalana sy ny fijerena ny sarintanin'ilay zotra.
toro-lalana - Ny olona manaraka torolàlana misy fanoharana dia mahavita azy ireo 323% tsara kokoa noho ny olona manaraka tsy misy sary. Mpianatra mijery sary izahay!
marika - Infographic tsara natao dia mampiditra ny marika amin'ny orinasa namolavola azy, manangana fahatsiarovan-tena ho an'ny orinasanao manodidina ny tranonkala amin'ireo tranonkala mifandraika amin'izany.
Engagement - Ny infographic tsara tarehy dia mahasarika kokoa noho ny andian-tsoratra. Matetika ny olona dia hanao scanner ny lahatsoratra fa tena mampifantoka ny sainy amin'ny sary hita ao anaty lahatsoratra iray, manome fotoana tsara hahitana azy ireo amin'ny infographic mahafinaritra.
Fotoana mipetraka - Ireo mpitsidika mandao ny tranokalanao matetika dia miala ao anatin'ny 2-4 segondra. Miaraka amin'ny fe-potoana fohy toy izany handresena lahatra ireo mpitsidika hihantona, ny maso sy ny infografika dia safidy tsara kokoa hisamborana ny mason'izy ireo.
mizara - Ny sary dia zaraina amin'ny media sosialy mihoatra ny fanavaozana ny lahatsoratra. Tiana sy zaraina amin'ny media sosialy ny infografika 3 im-betsaka kokoa noho ny karazana atiny hafa.
Famerenana amin'ny laoniny - Ireo mpivarotra izay mamorona infographic be dia be dia afaka mamerina ny sary ho an'ny sary mihetsika amin'ny famelabelarany, ny fandalinana tranga, ny taratasy fotsy, na ny fampiasana azy ireo ho fananganana horonantsary manazava.
fiovam-pony - Ny infografika tsara rehetra dia mandehandeha amin'ilay olona amin'ilay fotokevitra ary manampy azy ireo hiantso azy ireo hiasa. Ny mpivarotra B2B dia tena tia infografika satria izy ireo dia afaka manome ny olana, ny vahaolana, ny mampiavaka azy, ny statistika, ny fijoroana vavolombelona ary ny fiantsoana andraikitra amin'ny sary iray!
Ary koa ny famolavolana ny infografiko manokana ho an'ny tranokalako sy ny mpanjifako dia mijery Internet foana aho mitady infografika hampidirina ao anaty atiny. Ho gaga ianao amin'ny fahombiazan'ny votoatinao amin'ny infographic olon-kafa ao amin'ny lahatsoratranao… ary tafiditra ao anatin'izany rehefa mampifandray azy ireo ianao (izay tokony hataonao hatrany).
Ny infographic farany nataoko ho an'ny mpanjifa dia infographic amin'ny rehefa mahazo ny nifiny ny zazakely ho an'ny mpitsabo nify manompo ankizy any Indianapolis. Ny infographic dia malaza be ary ny pejy itodiana voalohany eo amin'ny tranonkalany ankehitriny, miaraka amin'ny antsasaky ny fitsidihana rehetra ao amin'ny tranokala vao natombony.
Laharana fandraisana na rohy Highbridge ho an'ny Infographic Quote
Tags: fiovam-ponytoro-lalanafotoana iainanaandraikitrafanazavanaImagefampahalalana sarystatistika infographicfampitana vaovaosary fampahalalanaMarketing Infographicsfahatsiarovanarepurposingfikarohana OptimizationSEOfizaranamasofianarana an-tsary
Sep 10, 2013 amin'ny 8: 23 AM
Tokony ho tia ny asa rehetra izay miditra amin'izy ireo, fa ny fanitsiana dia mety hanampy.
“Intéressant intéressée” ?????
Sep 10, 2013 amin'ny 10: 52 AM
Apr 23, 2014 ao amin'ny 5: PM PM
Salut Douglas. Tiako ny lahatsoratrao! Statistika mahaliana maro momba ity fitaovana malaza ity ho an'ny fijerena angon-drakitra. Tsy afaka nieritreritra fomba tsara kokoa hanehoana ny fahombiazan'ny infografika aho noho ny fampiasana iray. Niantehitra tamin'ny votoatinao aho hanoratana ny lahatsoratro ao amin'ny Medium, izay ilazako anao. Noheveriko fa tianao ny hanala azy: https://medium.com/inbound-marketing-clinic-at-nyu/61033a96ea78. Karinne
Apr 23, 2014 ao amin'ny 7: PM PM
Misaotra amin'ny filazana!
Sep 26, 2015 amin'ny 2: 35 AM
Fanangonana infografika mahafinaritra! Tiako fotsiny ny mamaky tantara iray manontolo amin'ny fampiasana tsy misy afa-tsy sary. Tena mahaliana izany. Mitombo ny fampiasana azy ireo azo antoka!
18 Oktobra 2015 à 11:38
Saika nila izany fanazavana rehetra izany ho an’ny asa nanendrena ahy tany an-tsekoly aho. Information tena marina,
Ary raha ny marina, raha manontany tena ianao hoe firy taona aho dia iraika ambin'ny folo taona ary efa tiako be ity fampahalalana ity. Asa tsara, Mr Douglas !!!!!!!!!!!
18 Okt 2015 amin'ny 5:50 PM
Tena mahafinaritra izany Amalshah! Misaotra anao tamin'ny fanamarihana… manana asa mamiratra mialoha ianao.